China Inofuridzirwa Tsika Oem Mufashoni Kushambira Vakuru Vakasununguka Mens Beach zvikabudura fekitari uye vagadziri | Dufiest
Inofema Tsika Oem Fashoni Shambira Yevakuru Vakuru Mens Beach Shorts
100% polyester bi-kutambanudza
Iwo mahombekombe emahombekombe isarudzo inopisa pakati pevanhu pavanenge vari parwendo rwekumahombekombe kana kumba uye vachitengeswa nesu pamutengo wevatengesi. Isu tinoshandisa jira rakasiyana senge donje, acylic, polyester uye Iyi vakadzi hoodie inowanikwa pamutengo wekutengesa. Vatengi vanogona kutenga hoodie yegorosa muhuwandu hwakawanda AT yemakwikwi mutengo AS AS DUFIEST mitambo inogadzira yakasarudzika kubva kuChina, wholesaler, ekisipota uye fekitori yemitambo, hoodies, track majaketi uye pasi, T-shati, Tangi yepamusoro uye akakwana mapfupi kupfeka. Inogona kushandiswa kune ese epamba uye kushanda muAvhu uye munguva yechando, inova yakapfava uye fashoni.
Yakagadzirwa muDUFIEST uye yakagadzirwa kubva kumabhodhoro epurasitiki akadzokororwazve uye polyester yakadzokororwa, iyo Life Shorts 2.0 ingori yehunyanzvi ipfupi yakagadzirira chero mvura kana nyika yakasungwa adventure.
Kubva pakadzika kwegungwa kusvika padziva risingaperi, CrossFit bhokisi kusvika kumatombo, iyo Life Shorts 2.0 yakazara nezvakanaka izvo zvinoita kuti vagadzikane pane ese chiitiko.
Nekusimudzira kuri pamberi pekugadzira dhizaini, izvi zvipfupi zvakavakirwa kuti zvigare uye zviuye zvichitsigirwa nevatambi vepasirose venhabvu uye vanochengetedza zvakafanana.
Kana yapfekwa seyisimbe, hunde anowanzo kunzi hunde dzekugezera kana kugeza hunde (kana neiyo yakajairika izwi kugeza sutu kana izwi rinoreva zvakafanana) uye kazhinji ipfupi pane bhodhi zvikabudura, iyo inowedzera kusvika pamabvi.Chinangwa chekutanga chembure mukati meviri pe kushambira hunde ndeyekupa rutsigiro kunhengo dzakavanzika apo kushambira. Iyo mambure kumbundira nhengo dzesikarudzi padhuze nemuviri nenzira yakafanana neyechipfupi-chimiro chemukati. Izvi zvinovadzivirira kubva munzira yekukuvara panguva yekurovedza muviri iwehaisi a bhodhi-anofarira, bhodhi shorts ndiyo sarudzo yakanakisa yekurembera kunze kwegungwa kana kutadza kupinda mudziva. Kutenda kusununguka kwavo kwakapfava, zvakapfava zvinhu, uye dhizaini yakachengeteka, vazhinji vakomana vanofarira kuzvipfekedza kushambira, panzvimbo peyakajairika kushambira hunde.
Pane zvikonzero zvakawanda nei ungade kupfeka boardshorts.
Pakutanga, vakagadzirirwa vafambi, uye vanopa akasiyana mabhenefiti akakosha kune avo vari kutasva mafungu. Imwe yemabhenefiti akadaro ndeyehuremu, inokurumidza-kuomesa, yakasimba zvinhu zvavakagadzirwa kubva.
Nekudaro, kana iwe uri kungoronga kutenga mapara maviri iwe ungangodaro uchinetseka kuti kukwira zvikabudura zvinogona kushandiswa kushambira? Mhinduro pfupi ndeye, hongu. Mhando dzakadai saO'Neill, Birdwell, Hurley, Quiksilver anga aripo kwemakumi emakore uye achisarudzika mumabhodhi mapfupi ari paanogona kwazvo mumvura. Nhasi tichatarisa kuti nei bhodhi zvikabudura zvakanaka kushambira pamwe nezvimwe zviitiko mukati nekubuda mumvura.
Yepfuura: Fashoni yeVarume Pfupi kuprinda Shorts Mabhrugwa emahombekombe Huru Huru Kushambira Akaomesa Mapants
Zvadaro: 2020 Varume Swimsuit Boxer Shorts Shambira Trunks